Home Wararka Shacabka Muqdisho oo loo diiday inay maraan qaar kamida waddooyinka Magaalada Muqdisho
Shacabka Muqdisho oo loo diiday inay maraan qaar kamida waddooyinka Magaalada Muqdisho
Waxaa saaka oo khamiis ah xiran inta badan waddooyinka waaweyn Magaalada Muqdisho, waxaana dadka shacabka ay yihiin kuwo lugeeynaya, maadaama aan la ogoleyn in gaadiidka dadweynaha ay isticmaalaan waddooyinkaas xiran.
Sidoo kale wadada ayaa ka xiran laga bilaabo Taaladda Daljirka daahsoon illaa Iskuul Bulusiya, waxaana Ciidanka Booliska ay xitaa saaka dadka u diidan yihiin inay lug ku maraan laga bilaabo Isgoyska Ceel-gaabta illaa Dugsiga Jeneraal Kaahiye, iyadoo ay ku sugan yihiin oo kaliya Ciidamo, xili dadka loo ogolaan jiray in halkaas ay lug ku maraan.
Sababta loo xiray waddooyinka Muqdisho ayaa ah in Maanta Caasimadda ay ka dhaceyso gaar ahaan Dugsiga Booliska ee Jeneraal Kaahiye doorashada saddex kursi oo kamid ah Golaha Shacabka Baarlamaanka 11-aad ee Gobolada Waqooyi ee Somaliland.
Todobaadkii hore ayey aheyd markii iyada oo xiran waddooyinka qaar ee Muqdisho Qarax Is-miidaamin ah lala beegsaday gaari Bas ah oo ay saarnaayeen ergada doorashada kuraas ka tirsan Golaha Shacabka, iyadoo qaraxaas ay waxyeelo kasoo gaartay ergadii lala beegsaday qaraxa.
Previous articleAl Shabaab oo sheegtay in ay weeraro toos ah ku bilowday Muqdisho
Next articleAMISOM oo qoraal ka soo saartay weerarada Al Shabaab ku qaadayaan Muqdisho
Dowladda oo War ka soo saartay Ayax ku dagay qaar ka...
(Ogow Sababta) Dastuurka Puntland “labo qodob oo xasaasi” ah laga badalaayo...